SPIEL'21 inokwezva 93.600 vashanyi: "Zvakanaka!" - Game poindi - bhodhi mitambo nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Oct 17, 2021 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau, GAME muEssen, pamusoro, Events
Off, off, off - iyo SPIEL yapera. Ndizvo zvemazuva emitambo yepasi rose muEssen gore rino. Iyo yekuronga Friedhelm-Merz-Verlag yakatanga zvakare muna 2021 mushure mekuzorora kwegore rimwe nekuda kweiyo corona mamiriro. Mhedziso yakanaka kubva kune vanoronga, vashanyi uye vaparidzi. Mukana mutsva wepa-saiti yekutengeserana fair wakaita kuti vateveri vemutambo vanyure zvakadzika muhomwe dzavo - mari yakayerera, kumufaro wemunhu wese.
Mazuva emutambo wepasi rese SPIEL '21 akapera zvakabudirira, saka kupera kwekuronga Friedhelm-Merz-Verlag. Mutambo mukuru wepasirese wekutengesa mitambo weparlor wakakwezva vashanyi zviuru makumi mapfumbamwe nezvitatu nemazana matanhatu gore rapfuura mushure mekuzorora zvine chekuita nekorona. Vanofarira mutambo uyu vakakwanisa kuona, kuyedza uye kutenga zvinopfuura zviuru zvezvigadzirwa zvitsva kubva kune 93.600 varatidziri kubva ku1.000 nyika. Vashanyi vakashandisa zvakakwana sarudzo yekupedzisira kunyanya. Mitambo mishoma, yakadururwa nerumbidzo yepamberi mukumhanya-mhanya, yakatengeswa mukati menguva pfupi. Vanenge vese vaparidzi vakataura nezvezvakanaka kune zvakanakisa nhamba dzekutengesa. Zvinoita sekunge vateveri vemutambo vakanyima mari yavo munguva dzedenda kuti vakwanise kuenda kunotenga kwakawanda. Vabudisi uye, pamusoro pezvose, vatengesi vemitambo vanopihwa izvi: Munguva yedenda, zvishoma kana hapana chaimboitika dzimwe nguva, kunyanya mubazi rekutengesa. Vatengesi vainetseka nekudonha kukuru kwekutengesa - kwavari chido chekutenga chikomborero.
Mufaro wekufamba mudzimba dzezviratidziro zvakare, kusvika pakuziva mitambo mitsva, kutenga edition yekutanga kana rarities uye kuwana bharidheki zvinovaka zvinopfuura kunyemwerera pazviso zvavo. Zvakare kuna maneja director weFriedhelm Merz Verlag, Dominique Metzler: "Zvakanaka!" Ndiwo aive mhedziso yake yechinguvana neMugovera. "Pfungwa yakashanda." Metzler angangodaro aitoziva vamwe vevaenzi uye nhamba dzekutengesa. Nekudaro, bhiri rakangogadziriswa pakupera: Nevanopfuura zviuru makumi mapfumbamwe vashanyi, iyo Corona debut yakabudirira. Kuenzanisa: Muna 90.000, 2019 vateveri vakaita rwendo rwekuenda kuEssen. Anopfuura zvakapetwa kaviri, panguva iyoyo pakanga pasina kutaura nezvedenda rinosanganisira kuvharika uye kurambidzwa kubata.
Kushanyira nzvimbo yekutengeserana kwaive pasi pemamiriro e3G; nzvimbo yekuongorora corona yakaiswa panzvimbo yekuratidzira yevashanyi. Mukuwedzera, mask yaisungirwa munzvimbo dzese. "Pfungwa yehutsanana yakanyatsofungwa ine nzira dzakakura, nhanho dzehutsanana dzakawedzera uye kudzora daro zvakazviratidza uye nekuona rusununguko rwakakodzera rwekufamba," akadaro Friedhelm-Merz-Verlag muchiziviso chayo chekupedzisira. Uye iyo pfungwa yakanyatsoshanda - zvirinani kune yakawanda chikamu. Pano neapo waigona kuvaona, makoti. Ipapo mask yechiso yakava kumeso chete - dzimwe nguva nemaune, dzimwe nguva nekusaziva, dzimwe nguva ndebvu dzaive munzira. Uye iwo chaiwo akarambidzwa cajon mabhegi akaumbawo mufananidzo muhoro, kunyangwe nguva nenguva.
Matanho acho akatanga kushanda, kunyanya neMugovera nguva yekudya kwemasikati mitemo yehutsanana neyekuchengetedza yakasvika painogumira. Kumhanyidzana kwevashanyi pazuva reEssen game fair, iro rinonyanya kufarirwa, dzimwe nguva raikonzera "system kuwandisa" pamatanho akati wandei. Maawa mashoma gare gare, mabhora akanga atwasanudza, uye macheki akasimba zvikuru akaitwa pamasuo. Dominique Metzler akataura kuti aisaziva nezve "zviitiko zvisina kunaka". Pfungwa iyi yakashanda. PaFriedhelm-Merz-Verlag ivo havasi kufara chete nezvazvo, asiwo nezve chokwadi chekuti fairi iri kuitika mune zvese. Metzler akaburitsa pachena kuti vaifanira kunge vakadedera: "2G ingadai yapa mufaro kurova kwakaipisisa," akadaro. Zvikurukuru, vamwe vaparidzi vokune dzimwe nyika vangadai vakasangana nezvinetso; kupinda muSPIEL kwaisazova kunobvira nokuda kwavo pasi pemirau yakaoma kudaro. Pakupedzisira, zvematongerwo enyika zvinofanira kusarudza kusunungura nzira mbiri - uye panguva imwechete kugadzirira nzira yeSPIEL'21.
Dominique Metzler zvino anotarira shure aine tariro: “Ndiri kufara zvikuru nechido chakagamuchirwa ichi chiratidziro nevaratidziri nevashanyi. Rakanga riri gore rinokosha kwatiri sevarongi, asiwo kune vose vatori vechikamu. Mitambo yekushandira pamwe ndeyemazuva ano, uye SPIEL yaive yekubatana kukuru nevarongi, varatidziri nevashanyi. Semurongi, tinonzwa tichisimbiswa nekubudirira kweiyo trade fair. Yakanga iri chaiyo sarudzo yekuronga analog yekutengeserana fair zvakare gore rino uye kupa vateveri vemitambo kubva kumativi ese epasi mukana wekutora chikamu mumusangano uyu unonyanya kukosha wenyika yemitambo. Vashanyi vakatevedzera mitemo yemutambo nenzira ine muenzaniso. "
Mifananidzo yeSPIEL'21 muEssen
[foogallery id = "32011 ″]
Varatidziri vakagutsikanawo nemukurumbira. Hurukuro iyi inoreva kutanga kutsva kweindastiri, akadaro Hermann Hutter, muparidzi (HUCH) uye sachigaro wesangano remaindasitiri revatsikisi vemitambo: “Iyi ratidziro yakanyatsoenderana pakati pekuchengetedza nehuwandu hwevashanyi. Vese vashanyi vaive vakarangwa - chaive chiitiko chakanakisa kuona mufaro uye kushingairira kwekuyedza zvigadzirwa zvitsva. Wese nhengo yeSpieleverlage eV akanzwa akasununguka uye akanakidzwa nenyaya yekuti vanofarira vatengesi vekunze nevatambi vakauya kuEssen kuzonyudza zvigadzirwa zvitsva. "
Iyo SPIEL'21 muEssen yakanga inopfuura kungodzokera kunharaunda yaunoziva. Kune indasitiri yemitambo, iyo yakanaka inogona kuve yemuenzaniso kune izvo zvinogoneka munguva dzakaoma nemafungiro akanaka. Iyo Friedhelm-Merz-Verlag inodana iyi "spark yekutanga yezvimwe zviitiko nevateereri". Nekuzorora kwese kweiyo corona mamiriro, zvinotevera zvinoshanda: Denda riri kure nekupera. Kunyanya, mitambo yekutengeserana yakanangana nepasi rose seSPIEL muEssen inoratidza kuti nyika huru ingaite idiki sei kana chiitiko chine njodzi chabatanidza nyika. Uko huwandu hwehutachiona huri kuderera munyika ino uye huwandu hwemajekiseni huri kuwedzera, izvi hazvisi izvo mune dzimwe nyika. Uye saka kurwiswa kwekorona kunogonawo kufungidzirwa kuSPIEL'22. Zuva remazuva emitambo yepasi rose mugore rinouya ragara rakagadziriswa: mitambo yebhodhi nemakadhi ichapembererwa zvakare muEssen kubva Gumiguru 6 kusvika 9, 2022.
Pakupera kwemazuva mana SPIEL '21, Andreas Finkernagel, Managing Director wePegasus Spiele, akawedzera kuti: "Ini ndinoshamiswa nekufamba kweiyo trade fair uye ndinovimba kuti ikozvino inogona kuenderera mberi nezviitiko zvekutarisana. pa SPIEL modhi." Kune Pegasus Spiele, pa-saiti zviitiko ndicho chepakati chinhu chekusangana nevatambi. “Ndakaona zviso zvakawanda zvinofara muhoro, vanhu vari kufara zvikuru kudzoka kuSPIEL,” akadaro Finkernagel. "Uye vashanyi vakanyatsotevedzera mitemo ine chekuita nekorona - masiki uye chinhambwe hazvina kukanganisa mafaro. Tiri kuonawo kuti kudiwa kwemitambo kwanyanya. Iwo matafura emitambo paPegasus Spiele stand aigara akadhindwa zvizere. Vanhu vachangowana nzira yekutamba nayo gore rapfuura vave kugara navo. "
Kazhinji kazhinji uye vatambi vemitambo vakazvikwevera kumba vachigutsikana uye nekutenga kwavo. Kwavari, pasinei nokusavapo kwevaparidzi vanosanozivikanwa vomumusha nokune dzimwe nyika, ratidziro yokutengeserana yairatidzika kuva yakakura zvakakwana. "Mumwe kana mumwe muparidzi anogona kuzvidemba kuti haana kutora chikamu mukuratidzira", yaive mhedziso yaDominique Metzler. Zvainzwika senge kuswipa kwehushamwari. Chero zvazvingava, musoro wemuparidzi wacho wakasununguka pachiso chake, icho chaizivikanwa nehafu. Uye 2022? Ndeapi matanho anogona kuwana nzira yekuenda kune inotevera SPIEL? Dominique Metzler haana kumubvumira kuti atarise mumakadhi ake, asi akabvuma kuti akanga aine makadhi muruoko: “Handisati ndamboda kuzivisa chinhu chipi nechipi. Aya ndiwo mazano angu! ” Zvinoita sekunge vashanyi vanofanirwa kugadzirira kune dzimwe shanduko mugore rinouya, izvo zvinozove zvinobatsira kune yakanaka yekutengeserana fair fair.
Kare Corona board game yakagadzirwa nemhuri: ichiripo!
Inotevera Zombie Rollerz inosanganisa pinball ine roguelike zvinhu
Kadhi mutambo Madota: Rise yePhoenixborn inodzoka nekunyoresa modhi
Cyberpunk 2077 kubva pamakore gumi nemasere: USK inopa mibairo tsvuku chinamira
Anime neJapan Gungano: Ndiyo yaive DoKomi 2019 muDüsseldorf
Board Game Wongororo: Kanagawa naIello